Izimbaza: izakhiwo ewusizo nendlela upheke kubo
Enye izimbaza Sekuyisikhathi eside izakhiwo ewusizo bebelokhu baziwa ngokuba abaningi, ayikhuliswanga ngokufuywa. Namuhla, kunamabandla amapulazi ngisho ezikhethekile lapho etshalwa. kakhulu Inqubo ezizalela kunalokho kukhathaza, kodwa naphezu kwalokhu, bezijabulisa kakhulu. By endleleni, it yasungulwa indlela yokutshala izimbaza namanje ku 1234 amatilosi Irish. Sekuyisikhathi eside yokuzalanisa shellfish kwadingeka ukuba kwehliswe olwandle oki ezisemaceleni okuyinto ukuhlala phansi amaqanda abo. Kuze kube manje, le nqubo nokulula kakhudlwana futhi vyraivayutsya zingabantu ezintanjeni ekhethekile noma izinkundla, sise ngaphansi kolwandle.
Kodwa okwamanje, izimbaza ziwusizo? Mayelana nalesi kabanzi ngokulandelayo.
Izimbaza: izakhiwo ewusizo
Imbaza inyama iqukethe semali phosphatides - wamaprotheni okumsulwa ukuthi anezakhi kakhulu. Ukusetshenziswa Its kuba nomphumela omuhle kwesibindi. Ngaphezu kwalokho, kuyinto inyama eyanele amafutha nokunomsoco kodwa equkethe kuphela ngenkathi polyunsaturated zinhlobo okunamafutha acid okuyinto ngcono ekusebenzeni kobuchopho.
Izimbaza, izakhiwo ewusizo okuyizinto ebanzi ngokwanele ukuba abe sebuningini microcells, okuyilezi: ayibe, ithusi, i-iodine, i-zinc manganese, nabanye. Futhi basuke ayegcwele amaqembu amavithamini ezifana B1, B2, B6, D, E, PP nabanye. Izimbaza ezibhekwa umphumela omuhle Antioxidants.
Kufanele kuqashelwe, futhi ukuphulukiswa izici. ukusetshenziswa njalo izimbaza endaweni ukudla kungavimbela emdlavuzeni. Inyama shellfish sixwayiso impahla izifo ezihlukahlukene emalungeni, kuhlanganise nesifo sokuqaqamba kwamalunga. Futhi ngesikhathi ukusetshenziswa izimbaza ungakwazi ukwenza ngcono amasosha omzimba futhi kwandisa umzimba ozivikela bebonke.
Izimbaza, izakhiwo ewusizo ezingesiyo kuphela ngezinhloso okwelapha, yakhiwa amavithamini D noB Ngaphezu kwalokho, abasakwazi okunomsoco, njengoba iqukethe ama-amino acid, okuyizinto ezibalulekile ngakho emzimbeni wethu. izimbaza Nutritional ongaqhathaniswa amaqanda inkukhu.
Kufanele kuphawulwe ukuthi ukunambitheka izimbaza limnandi kakhulu futhi emnene. Ngakho-ke, ithuba, namanje uqinisa umzimba wakho izakhi futhi amasosha omzimba wakho.
Inyama izimbaza aqukethe semali amaminerali imfuyo okuthiwa glycogen. Ngaphezu kwalokho, ecebile ne Vitamin cishe kuzo zonke izingxenye. Ukuba khona enzyme ezidingekayo ukuze kokudla esiswini, kwenza izimbaza wusizo pheshana emathunjini.
Ingabe izimbaza eziwusizo? Impendulo yalo mbuzo isobala. Ngokungangabazeki! Phela, ukusetshenziswa kwabo njalo izokunikela impilo enhle futhi kuyasiza bazogcwalisa umzimba nge amavithamini abalulekile ngobungako kwesokudla.
Indlela ukupheka izimbaza?
Sengikushilo lokho, cishe unombuzo mayelana efanele ukupheka inyama izimbaza. labapheki kakhulu kaningi ukupheka esegridini encane, efakwe phezu kwamalahle avuthayo. Ungase futhi esihle ukupheka izimbaza ukunyatheliswa yensimbi noma wenze kebab. Marinate kungcono iwayini omhlophe noma kalamula ne ukwengeza seasonings ukunambitha.
Ngaphambi ukupheka izimbaza udinga ukususa kubo emagobolondweni. Ngakho ukuthi bevula, kumele ubilise imizuzu embalwa. Khona-ke uthele amanzi abandayo kanye nezikhathi reboil ngaphezulu. Kodwa noma kunjalo, musa ubilise kubo isikhathi eside, kusukela inyama liyobe elukhuni kakhulu. Khona-ke udinga kokuyikhipha igobolondo ngommese.
Kuyadingeka ukuba sikhumbule imithetho ezibalulekile eziningana ngaphambi kokuba ziphekwe izimbaza. Uma shellfish ezazisanda kubanjwa ke kumelwe babe abaphile ngosuku olufanayo ukuhlanza bese upheka. Uma uthenge izimbaza eqandisiwe kakade ifomu sebehlanjululwe kufanele incibilikiswa kanye kuphela. inyama yabo ngokushesha futhi ungcolisa. Ngakho-ke, ukusebenzisa izimbaza akazange abangele ukudla ezinzima elinobuthi, wena kumelwe siqondiswe yiwo izincomo letinikwe lapha ngenhla.
Kanjani ukudla ukunciphisa umzimba: amathiphu ezimbalwa ezibalulekile
Proper Ukudla hypoallergenic ngoba lactating omama
Zingaki kilojoule eFenike futhi ewusizo kunale izithelo
Radical Ukudla - indlela olunameva ukuze neminye okusheshayo
"Glutoxim": yokusetshenziswa, ngempela
"Gaviscon": ukubuyekezwa, yokusetshenziswa, analogs